Aukey 2 USB Outlets na Power Bank Charger na USB C na ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ 20.000 mAh | Akụkọ akụrụngwa
Ma ọ bụ na ịnwe ngwaọrụ abụọ na-akwụ ụgwọ n'otu oge bụ ihe karịa na mbụ taa ọ bụ ya mere o ji adọrọ mmasị ịnwe n'aka anyị a njikọ na mgbidi na-enye anyị ohere jikọọ anyị ama na mbadamba n'otu oge ma ọ bụ smartphone na smart watch, dịka ọmụmaatụ.
Mana, na mgbakwunye na njikọ a na mgbidi ahụ, anyị na-agbakwunye ohere iburu ibu ebe ọ bụla anyị chọrọ, anyị nwere ike ile anya Aukey 20.000 mAh batrị mpụga nke na-agbakwụnye ọdụ ụgbọ mmiri USB atọ, USB C na ọdụ ụgbọ mmiri na mpụga, yana ọdụ ụgbọ mmiri Lightning.
N'okwu a Aukey na-arụ ezigbo ọrụ n'ụdị ngwa a ma na-enye anyị ngwaahịa dị mma yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Eziokwu bụ na anyị na-adabere na chaja karịa oge ọ bụla ma ịnwe ụdị ngwa a nwere ike inyere anyị aka mgbe niile.
1 Chaja chaja na ọdụ ụgbọ USB 2
2 Aukey USB C 20000mAh batrị mpụga nwere ọdụ ụgbọ mmiri 4 na ọdụ ụgbọ mmiri ntinye 3
Chaja chaja na ọdụ ụgbọ USB 2
N'okwu a, ihe anyị nwere na tebụl bụ ngwa na-akwụ ụgwọ maka ngwaọrụ abụọ. Ọ naghị agbakwunye ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ obere obere, mana ọ ga-aba uru na ịnwe ngwaọrụ ole na ole ị ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na anyị gaa njem ma ọ bụ ọbụlagodi n'ụlọ.
Nkọwapụta egosi njikọ na AiPower Adaptive Charging Technology: na-ege ntị iji nye ọsọ ọsọ kachasị elu na nke kachasị dị nchebe maka ngwaọrụ USB niile. Jụọ dị ka mkpa nke akụrụngwa ruo 2,4 A ma kwadoro site na 5V site na USB. Nke a bụ chaja nwere nchebe ma na-ezere ya ekpo oke ọkụ ma na-ebubata ngwaọrụ anyị.
N'ime igbe anyị na-ahụ Aukey PA-U32 USB Charger na ogwe aka abụọ, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ yana akara ikike ọnwa 24. Enwere ike ịchọta ihe nkwụnye a na Amazon ugbu a na ọnụego belata, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
20000mAh mpụga batrị Aukey USB Cjiri ọdụ ụgbọ mmiri 4 na ọdụ ụgbọ mmiri 3
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ batrị maka ndị chọrọ ụgwọ kachasị maka ngwaọrụ ọ bụla na karịa ndị niile na-echeghị nha na ịdị oke oke. Anyị adọọlarị aka na ntị na Bank Bank a dị oke egwu na oke ibu dịka ọ dị n'ibu, nha ya bụ 20 x 9,6 x 1,4 cm na ịdị arọ ya bụ 435 g. Nke pụtara na ọ bụ batrị ebughibu ma ọ buru ibu buru ibu. Tụnyere ndị ọzọ yiri batrị na okwu nke ndị dị otú ahụ nnukwu ibu, Aukey a abughikwa ihe na-adighi. Ma ka anyị gaa na nkọwa:
20000mAh na-ebu ikike ịgbaji iPhone 7 maka oge 6,8, 9,7-inch iPad Pro ihe dị ka ugboro abụọ ma ọ bụ Samsung Galaxy Note2 ruo oge 8
Ntinye 3A iji kwụọ ụgwọ otu USB-C na atọ USB-A ngwaọrụ n'otu oge (ọdụ ụgbọ USB-C nwere ike ịnye 3A dị ike n'onwe ya). Na-enye ohere ka laptọọpụ na-akwụ ụgwọ site na USB-C, Lightning ma ọ bụ micro-USB port
Nchekwa arụpụtara na-echedo ngwaọrụ gị maka oke iyi, oke oke na oke oke
Aukey PB-Y14 20000mAh Ike Bank tinye USB-A na eriri USB-C, ntuziaka onye ọrụ na akwụkwọ ikike ọnwa 24
N'echiche a, anyị chọkwara ịkọrọ gị niile na e mezigharị ya ma lekọta ya ka ọ ghara iru ala na-ebu n'etiti ngwaọrụ anyị. Ọ nwere ebughibu imewe na na-eme ka ọ dị mma ibu ma dina n'elu tebụl. E wezụga nke ahụ, Matte elu na-egbochi batrị niile na mkpịsị aka aka na zuru ezu na n'akụkụ ha na-agbakwunye ihe nkwụnye ọkụ na-acha ọkụ iji gosi anyị ọkwa batrị. Iji hụ batrị fọdụrụnụ, anyị ga-pịa naanị bọtịnụ nke batrị mpụga nwere.
N'ime ụbọchị anyị jiri ya, anyị nwere ike ịsị na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ na-ekpo ọkụ ntakịrị mana ọ nweghị ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ yana ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ibu ọ na-enye anyị maka ngwaọrụ anyị dị egwu oge ọ na-ewe iji kwụọ ụgwọ dịkwatụ ogologo karịa ka ọ dị na mbụ.
Ọnụahịa dị na nke a bụ nke kachasị mma na enwere ogo ogo na ọ bụ nke ahụ ugbu a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.ya na otu Nbudata 21% na ego mbu ya bu 57,99 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Chaja Aukey nwere ntinye 2 USB na Bank Power na USB C na ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ nke 20.000 mAh
Lenovo V730, laptọọpụ dị elu nke na-ebughi aha nna ya 'ThinkPad'